Dowladda Somaliya oo sheegtay inay howlgal qorsheysan ku dishay saraakiil Al-Shabaab | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Dowladda Somaliya oo sheegtay inay howlgal qorsheysan ku dishay saraakiil Al-Shabaab
Dowladda Somaliya oo sheegtay inay howlgal qorsheysan ku dishay saraakiil Al-Shabaab
Sh/Hoose (Halqaran.com) – Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay deegaanada Mushaani Daniga Majabta, halkaas oo la sheegay in ay ku sugnayeen Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Saraakiisha howlgalka hoggamineysay ayaa waxaa ay sheegeen in howlgalka lagu burburiyay Xarumo ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaannada Mushaani Daniga Majabta oo u dhexeeya deegaanka Janaale iyo degmada Qoryooleey ee gobolka Shabellaha Hoose.
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka, General Odowaa Yuusuf Raage oo la hadlay Idaacadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa sheegay in howlgalka lagu dilay Sarkaalkii Amniyaadka Al-Shabaab ee gobolka Shabeellada Hoose iyo Sarkaal kale iyo 50 Xubnood oo kale.
Wuxuu taliyaha Magacayada saraakiisha la dilay ku kala sheegay, Macallin Buqaari oo ahaa Sarkaalkii jabhada Al-Shabaab ee gobolka Shabellaha Hoose iyo Sheekh Xasan Ganeey oo Al-Shabaab u qaabilsanaa Amniyaadka gobolka Shabellaha Hoose.
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya S/guudto Odowaa Yuusuf Raage, waxa uu sheegay in howlgalka lagu bur buriyay Saldhigyadii Al-Shabaab ay ku lahayeen deegaannada Mushaani Daniga Majabta ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Ugu dambeyn, marka laga soo tago warkaan ka soo yeeray taliyaha Ciidamada xoogga dalka ayaan jirin warar madax banaan oo xaqiijinaya sheegashada dowladda, iyada oo Al-Shabaab dhankooda ka hadlin.